kaarboon Sodium kaarboon sulfate sodium bicarbonate sodium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Na2CO3 + NAHSO4 . Na2SO4 + NaHCO3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Na2CO3 (sodium carbonate) kaga falcelisa NaHSO4 ()?
Xaaladda Kale: ka yar NaHCO3
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Na2SO4 (sodium sulfate) iyo NaHCO3 (sodium bicarbonate)?
NaHSO4 waxay la falgashaa Na2CO3
Dhacdada ka dib Na2CO3 (sodium carbonate) waxay la falgashaa NaHSO4 ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Na2CO3 + NAHSO4 . Na2SO4 + NaHCO3
Ca (HCO3)2 + Na2CO3 → Tuug3 + 2NaHCO3
kaarboon Sodium kaarboon kaarboon-macdanta bicarbonate sodium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Ca(HCO3)2 + Na2CO3 CO CaCO3 + 2NaHCO3
Waa maxay xaalada falcelinta ee Ca (HCO3)2 () ay kaga falceliso Na2CO3 (sodium carbonate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa CaCO3 (calcium carbonate) iyo NaHCO3 (sodium bicarbonate)?
Dhacdada ka dib Ca (HCO3)2 () waxay la falgashaa Na2CO3 (sodium carbonate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Ca(HCO3)2 + Na2CO3 CO CaCO3 + 2NaHCO3
chloride cadmium kaarboon Sodium kaarboon chloride sodium Kaarboon acid-ka cadmium; Kaarboontka Cadmium; Milixda cadmium ee Kaarboon-acid
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta CdCl2 + Na2CO3 → 2NaCl + CdCO3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CdCl2 (cadmium chloride) oo la falgala Na2CO3 (sodium carbonate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa NaCl (sodium chloride) iyo CdCO3 (Carbonic acid cadmium; Cadmium carbonate; Carbonic acid cadmium salt)?
CdCl2 wuxuu la falgalayaa Na2CO3
Dhacdada ka dib CdCl2 (cadmium chloride) waxay la falgashaa Na2CO3 (sodium carbonate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada CdCl2 + Na2CO3 → 2NaCl + CdCO3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CdCl2 (cadmium chloride)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CdCl2 (cadmium chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CdCl2 (cadmium chloride) falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha badeecada CdCO3 (Kaarbonic acid cadmium; Cadmium carbonate; Kaarbonic acid cadmium cusbo)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CdCO3 (sodium carbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CdCO3 (Carbonic acid cadmium; Cadmium carbonate; Carbonic acid cadmium salt) alaab ahaan?
chloride aluminium biyaha kaarboon Sodium kaarboon aluminium hydroxide chloride sodium carbon dioxide
(digo yara) (lng) (rnn) (kt) (rnn) (kh)
(trung) (xoog leh) (trung) (trung) (trung) (xoog leh)
2 3 3 2 6 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2AlCl3 + 3H2O + 3Na2CO3 → 2Al (OH)3 + 6NaCl + 3CO2
Waa maxay xaalada falcelinta ee AlCl3 (aluminium chloride) kula falgala H2O (biyaha) ee Na2CO3 (sodium carbonate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Al (OH) 3 (aluminium hydroxide) iyo NaCl (sodium chloride) iyo CO2 (carbon dioxide)?
Aluminium koloriin waxay ku falcelisaa sodium carbonate xaaladaha qoyan
Dhacdada ka dib AlCl3 (aluminium chloride) waxay la falgashaa H2O (biyaha) waxay la falgalaan Na2CO3 (sodium carbonate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2AlCl3 + 3H2O + 3Na2CO3 → 2Al (OH)3 + 6NaCl + 3CO2
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Al(OH)3 (sodium carbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al (OH) 3 (aluminium hydroxide) alaab ahaan?
8Na2CO3 + 7O2 + 4Fe (CrO2)2 → 2 Fe2O3 + 8CO2 + 8Na2Crown4